Ogaden News Agency (ONA) – Waafdhuug oo ay CWXO Qabsadeen iyo gudoomiyaha gobolka Doolo oo dhaawac halis ah uu ka soo gaadhay
Waafdhuug oo ay CWXO Qabsadeen iyo gudoomiyaha gobolka Doolo oo dhaawac halis ah uu ka soo gaadhay
Posted by ONA Admin	/ July 20, 2013
Warar naga soo gaadhay gobolka Doolo xaruntiisa Wardheer ayaa naloogu sheegaya inay Ciidan Wadaniga Xoreynta Ogadenya ee JWXO cagta mariyeen dhamaan ciidamada gumaysiga Itoobiya ee joogay tuulada Waafdhuug.
Ciidamada maxaysatada ah ee ka garab dagalama cadawga Wayanaha ee looga yaqaano Ogadenya Hawarinta ayaa la sheegay inuu dhaawac culus ka soo gaadhay weerarka ay soo qaadeen CWXO. Magacayada qaar ka mid ah Hawaarinta ee dagaalkaa lagu dilay ayaa na soo gaadhay. Weerarkan oo cutub ka tirsan CWXO ay ku qaaday goobta ayaa gabi ahaanba lagu burburiyey xeradii ciidamada ee halkaas ku tiilay.
Gudoomiyaha gobolka oo horkacaya ciidamo gurmada ah ayaa iyagana dhexeda lagu helay waxaan lala eegtay gaadhigii uu saraa gudoomiyaha gobolka qarax burburiyay gaadhigaa iyo wixii saarnaa. Waxaa ku naf waayey 7ba ka mid ahaa Hawaarinta oo la socday gurmadka, halka dhaawac xun uu soo gaadhay gudoomiyaha iyo midka ay ku tilmaameen inuu yahay hogaanka nabadgalyada gobolka.
Labadan masuul oo lakala yidhaahdo Maxamed Cali Xayday oo ah Gudoomiyaha iyo H/Nabadgalyada Cabdi food ayaa dhaawacooda lagaga soo qaday diyaarad ciidan goobta dagaalka.
Wararka ayaa intaa ku daraya in dhaawac badan ay soo gadheen isbitaalka magalada Jigjiga. Faah-faahin dheraad kala soco halkan.
Nuur afgaab ONA/Adis ababa
maxamed abdikarim says:
wa wax loobahnaa in mar hore lasameeyo oo lalasoodahay halna ogada hadaydnaan dadkan xasuuqin idinka cabsan mayan hawlgalada hala kordhiyo hanagu khasbina inan qaracan udhimano war dadka gacan bir ah kuqabta